Phupha ngesango Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Isango lihlala liyinxalenye yocingo okanye umda othintela izilwanyana ezinje ngeenkomo okanye amahashe ukuba zishiye indawo ebezenzelwe yona okanye zibaleke. Kwangelo xesha, iingcango zisavumela ukufikelela kwindawo evaliweyo okanye ukuphuma kuyo ukuba kukho imfuneko.
Ukusetyenziswa komnyango kudlala indima kangakanani ukuba kutolikwa njengophawu lwephupha? Utolika njani amaphupha emnyango kwaye athini ngomntu ochaphazelekayo?
1 Uphawu lwephupha «umnyango» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umnyango» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umnyango» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umnyango» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokoluvo ngokubanzi, umnyango, omele umqobo ephupheni, ngaloo ndlela uthintela indlela, ufuzisela a Ukugqithisa ebomini bokwenyani. Umntu ekubhekiswa kuye usenokuba ucwangcise kakhulu. Ufuna ukuphumeza okuninzi kwaye afune okuninzi kuye, okugrogrisa ukumphazamisa. Endaweni yokuba uzibeke emngciphekweni wokungaphumeleli kwesi sizathu.
Ke ngoko, iphupha kufuneka liqondwe njengesimemo sokuphinda ucinge izicwangciso zakho. Ngaba uzama kakhulu kwaye ukhawuleze kakhulu? Ngaba kukho izinto ezingabalulekanga ngalo mzuzu ezivumela ukulibaziseka? Ukongeza, umnyango unokuqulatha inqaku lokuba amaphupha akufuneki axhomekeke kakhulu kubantu abasondeleyo. Kukho umngcipheko wokuba ummelwane wakho angakwenza oko isidenge y ngcatsha unamandla. Kufuneka ulumke kwaye uqaphele ngononophelo ukuba ngubani onokumthemba kwaye ungamthemba.
Nabani na odlula kumnyango ovulekileyo ephupheni unemeko yabo yobomi yangoku iindlela ezimbalwa. Uninzi lwendlela yakho sele igqityiwe kwaye awungekhe uphinde uyitshintshe. Kodwa nangona amathuba okukhetha kwizenzo zakho emancinci, oku akuthethi ukuba kufuneka uthembise into embi: nangona kunjalo, uya kuphumelela kwaye wonwabe ngendlela esele imiselwe ebomini, kuba iya kuba nakho ukukunika ukhuseleko oluhlala luhleli.
Uphawu lwephupha «umnyango» - ukutolikwa kwengqondo
Umnyango uhlala uhleli ephupheni ngokwendlela yokutolika kwengqondo. umqobo okanye enye umqobo ezithiwe thaca kumntu onomdla kwindlela yakhe yobomi. Unokuba nakho into ethile ngokungazi okanye ngokungazi, kodwa ngekhe ukwazi ukuyilungisa kwangoko. Umphuphi angathanda ukwenza okungakumbi ngobomi bakhe okanye akukhokelele kwicala elithile, kodwa ngamathuba anawo ngoku akakwazi ukwenza njalo.
Ke ngoko, iphupha elo linokubonwa njengophawu lwe-subconscious ngokwalo ukwamkela imeko kwaye ulinde ngomonde. Liyeza ixesha lokuba unikwe amathuba amatsha. Ke kuya kuba kuye ukuba wenza ntoni ngayo.
Uphawu lwephupha «umnyango» - ukutolika kokomoya
Kwinkcazo yamaphupha okomoya, umnyango unokuba ngu umqobo zimele ukuba kuthintela ukuphupha kwindlela yakho yokomoya. Kuya kufuneka uzame ukufumanisa ukuba ingaba yintoni le ngxaki kwaye ungayijikeleza njani.